7 juin 2018 - Page 5 sur 5 - Midi Madagasikara
Nahafaty vady : Tsy nanome ny antony hatramin’ny farany
“Tsy nety nilaza izay antony ilay lehilahy” raha araka ny fanazavan’ny fianakavian’ny maty. Nanaiky izy ny namono nahafaty ny vadiny 28 taona izay vao natao mariazy taminy tamin’ny taon-dasa, saingy kosa tsy nomeny izay antony. Na izany aza anefa dia efa mandeha ny resaka fa misy “mama sôsy” ao ambadik’ilay famonoana. Io farany no mitady…
Morondava : Lehiben-dahalo iray maty voatifitra, tompon’omby telo naratra mafy
Miverina mafampana sy mahazo laka indray tato ho ato ny asan-dahalo misesisesy any amin’ny Distrikan’i Morondava, renivohitry ny Faritra Menabe, ka miraviravy tanana tanteraka ny mponina any an-toerana manoloana ny firongatry ny tsy fandriampahalemana misy. Omaly naraina, tokony ho tamin’ny dimy ora, dia dahalo miisa 26 nirongo fitaovam-piadiana no nanafika tao Soanafindra Kaominina ambanivohitr’i Bemanonga,…
Antsirabe : Fanafihana ny tobin’ny masera, voasambotra ny efa-dahy
Voasambotry ny polisy ny jiolahy efa-dahy isan’ny tompon’antoka tamina fanafihana ny tobin’ny mesera teny Ambano. Nidoboka am-ponja izy efa dahy ireo taorian’ny fitsarana azy ny alarobia lasa teo. Tsy ilay fanafihana ny masera akory no nahavoasambotra ireo jiolahy ireo fa fanafihana fikambanana iray tao Vatofotsy. Nisy nanafikia ny foibem-pikambanan antsoina hoe Sodifanana ka very tamin’izany ny…